Edo ခေတ်က တုပ်ကွေးရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနည်းလမ်းဟာ အောင်မြင်ခဲ့သလား? - JAPO Japanese News
လာ 23 Mar 2020, 11:49 မနက်
ဂျပန်မှာတော့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆောင်းရာသီရောက်ပြီဆိုရင် တုပ်ကွေးဟာ ပျံ့နှံ့လို့လာပါပြီ။ ဒီနှစ်ကတော့ ဆောင်းရာသီဖြစ်လေ့ရှိတဲ့တုပ်ကွေးအပြင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လည်းပျံ့နှံ့နေလို့ ကျောင်းတွေ ပွဲတော်တွေ ပိတ်ပစ်ရတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်ပေါ်နေတာ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ပါပဲ။
မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေကိုကာကွယ်ဖို့အလွန်ခဲယဉ်းပေမယ့်လည်း၊ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ခန့်ကဖြစ်တဲ့ Edo ခေတ်တုန်းက ဒီလိုကူးစက်ရောဂါတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့သလဲ?
ဒါဟာတော်လှန်နိုင်တယ်လို့ပဲဆိုရမလား. . .ဒါမှမဟုတ် ထိရောက်စေတာလား?
အဲဒီနည်းလမ်းကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ အိမ်ရှေ့အဝင်ပေါက်ဝမှာ “久松留守” Hisamatsu Rusu သို့မဟုတ် “久松るす” Hisamatsuru su လို့ရေးထားတဲ့စာရွက်ကိုကပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ “Hisamatsu အိမ်မှာမရှိ” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
ထိုအချိန်တုန်းက လူကြိူက်များခဲ့တဲ့ Kabuki ( Japanese Classic Drama) ဖြစ်တဲ့ “ Osomeku Hisamatsu” မှလာပုံရပါတယ်။
အဲဒီခေတ်တုန်းက လူတိုင်းလိုလိုသိကြတယ်လို့ပြောတဲ့ အရမ်းကိုနာမည်ကြီးတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး ၁၇၁၀ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန် အချစ်ဇာတ်လမ်းအဖြစ်အပျက်လေးလို့ပြောကြပါတယ်။
တုပ်ကွေးကိုအဲအချိန်တုန်းက Osome Kaze အိုဆိုမဲအဖျားလို့ ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီနာမည်နဲ့ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိကနေရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ နာမည်ကနေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
Hisamatsu အိမ်မှာ မရှိဘူးဆိုတာက . . .
Osome ချစ်တဲ့ Hisamatsu ဒီအိမ်မှာမရှိလို့ မဝင်လာပါနဲ့ ! ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
ဒီလိုလုပ်ရင် ဗိုင်းရပ်စ် မကူးစပ်ခံရဘူးလားဆိုတော့ . . .
အဲဒီအချိန်တုန်းက ဆေးပညာတွေ ဆေးကုသမှုတွေ မတိုးတက်သေးလို့ ဆေးရုံတွေဟာလည်း အရမ်းကို‌‌ ‌စျေးကြီးကြပါတယ်။ သာမန်လူတွေ ဆေးရုံမတက်နိုင်ကြပါဘူး။
ဒီလို နောက်ပြောင်တာမျိုးကို လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ထိုအချိန်က ဂျပန်တို့ရဲ့ ဟာသဉာဏ်ဟာလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်။
ဒါကို ပထမဆုံးတွေးမိခဲ့တဲ့သူကတော့ ပါရမီရှင်ပဲနော်။
အဲတုန်းကဆိုရင်လေ တုပ်ကွေးတော်တော်များများကို အမျိုးသမီး နာမည်တွေပေးခဲ့ကြတယ်တဲ့။
Osome တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပဲ ဒီတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်လည်း အသုံးပြုခံခဲ့ရပါသေးတယ်။
သူမကတော့ Edoမြို့မှာ မီးရှို့ရာကနေ ကြီးမားတဲ့ မီးလောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သူပါ။
အဆုံးမှာသေဒဏ်ပဲလို့ဆိုပေမယ့် ဒီမီးလောင်မှုလိုမျိုး အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပျံ့နှံ့သွားတယ်ဆိုတဲ့ အရာမှ Oshichi အဖျားဆိုတဲ့ နာမည်လည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
စိတ်မကောင်းစရာကတော့ Oshichi အအေးမိ တဲ့ တုပ်ကွေးတုန်းက “HIsamatsu Rusu” လိုမျိုး ကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းမရှိခဲ့ဘူးလို့တော့ သိရပါတယ် !!!!!!
အဲဒိုခေတ် မီးသတ်သမားတွေရဲ့ အပျံစားဝတ်စုံ ဒီဇိုင်းများ ！